आईफोन s एस प्लस समीक्षा | ग्याजेट समाचार
नयाँ आईफोन s एस प्लसको समीक्षा
लुइस प्याडिला | | मोबाईलहरू, समीक्षा
नयाँ आईफोन्स s एस र s एस प्लस भर्खरै स्पेन र मेक्सिकोमा आइपुगेको छ र हामी यी नयाँ एप्पल स्मार्टफोनहरूको विश्लेषण गर्ने अवसर गुमाउन चाहँदैनौं। विशेष रूपमा सबैभन्दा ठूलो आईफोन s एस प्लस, जुन यसको .6..6 इन्च स्क्रीनको साथ फेबेटको बजारमा बढ्दो मागको बजार सामना गर्न जारी रहन्छ।
यसको नयाँ १२ Mpx रियर क्यामेरा, M Mpx फ्रन्ट, फुल एचडी स्क्रिन थ्रीडी टच र नयाँ रेटिना फ्ल्यासको साथ छ आईफोनहरूको यस नयाँ पुस्तामा केहि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरू हुन्। हामी तपाईंलाई तल सबै विवरण र भिडियो दिन्छौं जसमा तपाईं कार्यमा नयाँ कार्यहरू देख्न सक्नुहुन्छ।
1 लगातार डिजाइन
2 अधिक शक्ति, उही स्वायत्तता
3 क्यामेरा सुधारहरू
4 प्रत्यक्ष फोटोहरू, तपाईंको क्याप्चरहरू एनिमेट गर्नुहोस्
5 थ्रीडी टच, आईओएस of को इन्टरफेसमा क्रान्ति
6 भित्रबाट नयाँ आईफोनहरू, बाहिरबाट समान
परम्पराको सत्य हुनु, एप्पल भित्र यसको पिँढी the s। मा परिवर्तन गर्दछ। आईफोन s एस को डिजाइन मा परिमार्जन न्यूनतम र अभेद्य छ। एक प्रबलित एल्युमिनियमले यसलाई अघिल्लो पुस्ताको भन्दा अधिक वजन दिन्छ, विशेष गरी २० ग्राम बढी (१6२ जी) र यसको आकार ०.mm मिमी बढ्छ तर अझै अघिल्लो मोडेलहरूको हौसिingsसँग उपयुक्त छ। 20s र 192s Plus को लागि नयाँ अनन्य "गुलाब सुन" रंगमा उपलब्ध हुनुको साथै, तपाईं यसलाई टर्मिनलको पछाडि कुँदिएको "S" द्वारा अघिल्लो जेनरेशन भन्दा भिन्न पार्न सक्नुहुन्छ।
अधिक शक्ति, उही स्वायत्तता
आईफोन ss र s एस प्लसमा नयाँ ए process प्रोसेसरहरू दुई सत्य "जनावरहरू" हुन् जसले केही हालका ल्यापटपहरूमा पनि प्रदर्शन गर्दछ। यदि यसमा हामी त्यसलाई थप्दछौं र्याम मेमोरी २ जीबी सम्म जान्छ परिणाम यो हो कि यी दुई नयाँ टर्मिनलको प्रदर्शन जे पनि उनीहरूले सामना गर्ने कुनै पनि कार्यमा उत्कृष्ट छ।
ब्याट्री, तथापि, क्षमता को मामला मा समाप्त गरीएको छ, तर स्वायत्तता मा छैन।। प्रोसेसरको दक्षतामा सुधारले सुनिश्चित गर्दछ कि नयाँ आईफोन s एस र s एस प्लसको ब्याट्री जीवन उनीहरूको पूर्ववर्तीहरूको जस्तै हो, एप्पलले आफ्नो वेबसाइटमा आश्वासन दिन्छ र हाम्रो पहिलो प्रभावले पुष्टि गर्दछ। Plus प्लसबाट आउँदैछु मैले ब्याट्रीको जीवन बाहेक कुनै परिवर्तन देखेको छैन, के बढि छ, नयाँ संस्करण आईओएस .6 .१ को धन्यवाद छ म यो भन्दछु कि यो बेहतर छ।
नयाँ आईफोनमा दुई क्यामेरा सुधारिएको छ। पछाडिको क्यामेरा १२ Mpx सम्म जान्छ र आईफोन Plus एस प्लसको मामलामा यसले अप्टिकल स्टेबलाइजर पनि राख्दछ, यस्तो कुराले यसलाई ss भन्दा फरक पार्छ जुन अझैसम्म यो छैन। व्यावहारिक उद्देश्यका लागि परिवर्तन सजिलै देखिन सकिंदैन, र त्यस्तै प्रकाश अवस्थामा आईफोन Plus प्लस र s एस प्लसको साथ लिइएको फोटोहरू व्यावहारिक रूपमा उस्तै छन्। फ्रन्ट क्यामेरा धेरै परिवर्तन भएको छ र यसले देखाउँदछ। हालको M एमपीएक्सको साथ, भिडियो कल र सेल्फीहरू बिभिन्न भिन्न छन्, अघिल्लो मोडेलहरू भन्दा धेरै उच्च गुणको साथ। एप्पलले रेटिना फ्ल्यास पनि प्रस्तुत गर्‍यो, जसले सेल्फी लिन र फ्ल्यासको रूपमा कार्य गर्नको लागि स्क्रिन लाईट बनाउँदछ, कम प्रकाशमा राम्रो परिणाम प्राप्त गर्ने यस्तो चीज।
भिडियो रेकर्डि 4K भिडियो रेकर्ड गर्ने क्षमताको साथ सुधार गर्दछ, र यसको रेकर्डि duringको बखत तपाईं p Mpx को फोटो लिन सक्नुहुनेछ। साथै १२० fps मा पूर्ण HDD भिडियो रेकर्ड गर्ने नवीनता पनि समावेश छ। भिडियो रेकर्डि and र प्लेब्याक सम्बन्धी बाँकी विशेषताहरू अघिल्ला मोडेलहरू जस्तै छन्।
प्रत्यक्ष फोटोहरू, तपाईंको क्याप्चरहरू एनिमेट गर्नुहोस्
सब भन्दा जिज्ञासु नवीनताहरू मध्ये एक एनिमेटेड फोटोहरू लिने सम्भावना हो। प्रत्येक चोटि जब तपाईं फोटो लिनुहुन्छ, विशेष केहि नगरीकन, तपाईं वास्तवमा एक सानो भिडियो अनुक्रम रेकर्ड गर्नुहुनेछ जुन तपाईं थ्रीडी टचको लागि धन्यवाद खेल्न सक्नुहुन्छ। फोटो कुनै फोटोको जस्तै स्थिर हुनेछ, तर तपाईं स्क्रिनमा हल्का प्रेस गर्दा यो सजीव हुन्छ र त्यो सानो भिडियो र अडियो अनुक्रम प्ले हुन्छ। यी फोटोहरू आईओएस installed स्थापित भएको कुनै पनि उपकरणसँग साझेदारी गर्न सकिन्छ, जुन तिनीहरूलाई प्ले गर्न पनि सक्दछ।
थ्रीडी टच, आईओएस of को इन्टरफेसमा क्रान्ति
यो नयाँ आईफोनहरूको मुख्य नवीनता हो। तपाईंको स्क्रीन अघिल्लो मोडेल र भन्दा फरक छ तपाईं यसको प्रयोगको दबाबको स्तर पत्ता लगाउन सक्षम छ। एक नयाँ प्रकारको फोर्स टच जुन एप्पलले आईफोनमा थ्रीडी टच डब गरेको छ जसले तपाईंलाई तपाईंको उपकरणसँग पूरै नयाँ तरिकाले अन्तर्क्रिया गर्न अनुमति दिन्छ। आइकनमा क्लिक गर्नुहोस् र एप्लिकेसन खुल्नेछ, केहि बढि प्रेस गर्नुहोस् र तपाईंलाई सबैभन्दा साधारण प्रकार्यहरूमा पहुँच हुनेछ। तपाईं ट्विटरमा फोटो पोष्ट गर्न सक्नुहुनेछ, सम्पर्क कल गर्नुहोस् वा तपाईंको स्प्रिंगबोर्डबाट सिधा सन्देश लेख्नुहोस्।
थ्रीडी टचले अनुप्रयोगभित्र धेरै सम्भावनाहरू पनि प्रदान गर्दछ, इनबक्सबाट कसरी ईमेल हेर्नुहोस्, यसलाई पढिएको रूपमा चिन्ह लगाउनुहोस् वा मेटाउनुहोस्, र यी सबै प्रविष्ट नगरीकन। वेब सामग्रीमा लिंकको साथ पनि यस्तो हुन्छ: तपाईं लिंकलाई थोरै थिचेर पूर्वावलोकन गर्न सक्नुहुन्छ।
विकासकर्ताहरूले यो नयाँ टेक्नोलोजीमा भारी सट्टा लगाइरहेका छन् र त्यहाँ पहिले नै धेरै तेस्रो पक्ष अनुप्रयोगहरू छन् जुन हामी एप्प स्टोरमा फेला पार्न सक्छौं जुन थ्रीडी टचसँग मिल्दो छ, र यसले अझ सुरू गर्न केहि पनि गरेको छैन। यो समान थ्रीडी टचले तपाईंलाई छवि स्क्रिनमा एनिमेसन देख्न अनुमति दिन्छ जुन तपाईंले लक स्क्रिनमा वालपेपरको रूपमा कन्फिगर गर्नुभयो, वा मल्टिटास्किas वा अघिल्लो एप्लिकेसनमा छिटो स्टार्ट बटन थिचेको बिना नै पहुँच गर्नुहोस्।
भित्रबाट नयाँ आईफोनहरू, बाहिरबाट समान
यी नयाँ आईफोन 6s र s एस प्लस समावेश गर्ने नयाँ कार्यहरू धेरैका लागि धेरै रोचक हुन सक्छन्, यद्यपि तिनीहरू दृश्यात्मक रूपमा देखिएका छन् कि धेरैले परिवर्तन आकर्षक देख्दैनन् यदि तिनीहरूसँग पहिले नै or वा Plus प्लस छ भने। थ्रीडी टचको आगमन आईओएसको ठूलो परिवर्तन हो, यद्यपि यो परिवर्तनको सुरूवात मात्र हो। के यो परिवर्तनको लायक छ? आईफोन s एस वा सो भन्दा पहिले आउनेहरूले निश्चित रूपमा प्रदर्शन, ब्याट्री, क्यामेरा र इन्टरफेसको हिसाबले धेरै भिन्नताहरू देख्नेछन्, तर हुनसक्छ पहिले नै device वा Plus प्लस भएकाहरूले एक पटक नयाँ उपकरणमा परिवर्तनको खुशीयाली पार गरिसकेपछि। यो के हो त्यहाँ वास्तवमै केहि नयाँ चीजहरू छन् ती नयाँ उपकरणहरूसँग गर्न सक्छन् जुन तिनीहरू पुरानोसँग गर्न सक्दैनन्.
नयाँ थप शक्तिशाली A9 प्रोसेसर र २ जीबी रैम
नयाँ मजबूत प्रबलित एल्युमिनियम
अपग्रेड गरिएको १२MP र MP MP क्यामेरा 12K भिडियो रेकर्डि .को साथ
नयाँ सुविधाहरू: थ्रीडी टच र लाइभ फोटो
छिटो र अधिक भरपर्दो टच आईडी
अघिल्लो मोडेलको रूपमा समान डिजाइन
यसलाई रेकर्ड गर्न सक्षम भए पनि 4K खेल्दैन
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » टेलिफोनी » मोबाईलहरू » नयाँ आईफोन s एस प्लसको समीक्षा
धेरै राम्रो समीक्षा तर यदि ममा भएको कुनै कुराको बारेमा टिप्पणी गर्न चाहान्छु भने मैले एकपटक आईफोन परिवर्तन गरिसकें किनकि मलाई मेरो के भइरहेको थियो भनेर याद गरें र लुइस पनि तपाईंलाई हुन्छ भन्ने देखिए पनि यो चलिरहन्छ। यो बाहिर जान्छ कि जब तपाईंसँग आईफोन एक समयको लागि लक हुन्छ वा १० सेकेन्ड वा थोरै बढी भन्नुहोस् जब तपाईं यसलाई आफ्नो फिंगरप्रिन्टबाट अनलक गर्नुहुन्छ, माथिको पट्टी जहाँ समय हुन्छ, ब्याट्री र अपरेटर गायब हुन्छ र पुन: देखा पर्नमा समय लाग्छ। मलाई लाग्यो कि यो चिप हुनसक्दछ किनकि मेरो सामसु fromबाट हो वा मेरो आईफोन गलत थियो तर मैले युट्युबर्सलाई के हुन्छ भनेर भिडियोहरू बाहिर हेरे जुन मैले समीक्षा गरें ताकि मलाई थाहा छैन किन यो हुन सक्छ वा यदि यो हो टच आईडी विफलता किनकि यो धेरै छिटो जान्छ र in मा जब यो ढिलो हुन्छ जुन मैले मेरो बुबामा प्रमाणित गरेको जस्तो हुँदैन। मैले पाए।
मेरो s एस प्लस टीएसएमसी हो, र हो, यो तपाईले भनेको कुरा सही हो, तर यो व्यापक छ, त्यसैले यो पक्कै सफ्टवेयर बग हो जुन भविष्यका अपडेटहरूमा सुधार हुनेछ।
धेरै उत्तर दिनुहोस् लुईस मलाई उत्तर दिँदै र मलाई यो डराउनका लागि हटाउनु भएकोमा त्यसको शीर्षमा। सत्य यो हो कि यो असजिलो छैन तर चिन्ताजनक छ किनकि कहिलेकाँही यसले तपाईंलाई स्क्रिन सार्नको लागि केहि समय लिन्छ तर आशा छ कि आईओएस 9.1 .१ को साथ बगहरू यस रूपमा स्थिर हुनेछ। के म नोटिस गर्दछ बैटरी एक कार hehe मा पेट्रोल जस्तै जान्छ। तर मलाई लाग्छ कि म भाग्यशाली हुनेछैन र यदि मैले यसलाई परिवर्तन गरे भने मलाई TSMC दिनुहोस्। के तपाइँ सोच्नुहुन्छ कि यो आईफोनहरू परिवर्तन गर्न र परिवर्तन गर्न लायकको छ जबसम्म म TSMC छुदिन? किनकि म वास्तवमै सोच्छु कि २% वा%% त्यति ध्यान दिएन छैन र म तपाईलाई TSMC भएको जानकारी दिन चाहान्छु कि यो आईफोन than भन्दा भन्दा छिटो जान्छ। फेरि धन्यवाद र म तपाईको उत्तरको प्रतीक्षामा छु। अभिवादन
मलाई लाग्दैन कि त्यहाँ भिन्नताहरू छन्। फरक वास्तवमा .6.1.१ को साथ आउँदैछ। बीटा धेरै राम्रो छ र प्रदर्शन र ब्याट्री धेरै ध्यान दिएर छन्, तपाईं परिवर्तन कसरी याद गर्नुहुनेछ।
के तपाईंले 6s क्यामेरा6क्यामेरा भन्दा राम्रो छैन भनेर भन्नु भएन?
आईफोन s एस क्यामेरा 6. भन्दा राम्रो छ। अर्को कुरा यो छ कि १२ Mpx सुधार एकदम स्पष्ट हुनको लागि पर्याप्त परिवर्तन होइन, तर अन्य विशेषताहरू बराबर छ भने यो स्पष्ट छ कि १२Mx MMpx भन्दा राम्रो छ।
ठीक छ, यो एक ठूलो पर्याप्त विफलता हो कि यसले k के रेकर्ड गर्न सक्छ र अझै यसलाई पुन: उत्पादन गर्न सक्दैन। अधिक जब यस समयमा त्यहाँ यसको सामग्री हेर्न धेरै साधन छैन। एप्पलले ह्यान्डल गर्ने मूल्यहरूको तुलनामा त्यो कम छ, मैले k के गुणवत्ताको साथ एक स्क्रिन राखेको थिएँ। त्यहाँ पहिले नै व्यावहारिक रूपमा पुरानो मोबाइल फोनहरू छन् जस्तै LG G4 सँग यसको पहिलो संस्करणदेखि नै। ब्याट्रीको मुद्दामा पनि यस्तै हुन्छ, यस्तो देखिन्छ कि उनीहरू पर्याप्त क्षमताको ब्याट्री राख्न डराउँछन् ... सज्जनहरू, त्यहाँ lower००० एमएएचको कम तल्लो दायराको बजारमा टर्मिनलहरू छन्। दुध, तपाईं क्षमताको ती shit क्षमता संग के गर्नुहुन्छ कि तिनीहरू ह्यान्डल गर्छन्? आईफोन s एस प्लसका लागि २4० एमएएच, यो लगभग हास्यास्पद छ; अवश्य, त्यसोभए यो अचम्म लाग्दैन कि मानिसहरूले गुनासो गरे। स्रोतको खपत जति किफायती र कुशल छ, शारीरिक रूपमा असम्भव छ कि यस्तो सीमित क्षमता संग ब्याट्री को प्रदर्शन राम्रो हुन सक्छ। तपाईंले नयाँ उत्पाद सुरू गर्नु अघि यी थोरै सुविधाहरू अध्ययन गर्न आवश्यक छ, कृपया उनीहरूसँग पहिले नै बजारमा केही मोडेलहरू छन्। र सबैभन्दा खराब कुरा यो हो कि उनीहरूको क्षमता बढाउनको सट्टा तिनीहरूले यसलाई घटाए। न त मेरो लागि त्यो राम्रो हो जुन मैले धेरै मिडियामा पढेको छु, "उनीहरूले यसलाई घटाए किनकि त्यहाँ ठाउँ थिएन", हेरौं, मेरो हातमा 3००० एमएएच ब्याट्री छ जुन आईफोन Plus प्लस ब्याट्रीको तीनवटा भाग समातेर समातेको छ। म 4000G जी देखि आईफोन प्रयोग गर्दैछु तर एप्पलको बारेमा केहि चीजहरू छन् जुन मैले कहिले पनि बुझ्न सकिनँ, जस्तै उनीहरूको बढ्दो मूल्यहरू बिना कुनै उपाय नै र सबैभन्दा खराब कुरा भनेको यो हो कि, रियल इस्टेट संसारमा भएको भए पनि हामी यसको लागि जिम्मेवार छौं। अनुमान बबल कि तिनीहरूले माउन्ट गरेका छन्।
MrM लाई जवाफ दिनुहोस्
विजेता पुरुषहरू भन्यो
नमस्ते मलाई आईफोन s एस बनाम आईफोन3एस बिच big ठूला भिन्नता दिनुहोस् जुन मसँग worth एस किन्नको लायक छ वा छैन? सबै चीजको लागि धन्यबाद, म ट्रक ड्राइभर हुँ र मलाई महत्वपूर्ण छ कि मेरो आईफोन राम्रोसँग स्वागत र जीपीएस फोटोहरू र अन्य एसएस द्वारा ल्याउनु पर्छ।
विजेता पुरुषहरुलाई जवाफ दिनुहोस्
कसरी एक इन्स्टाग्राम खाता मेटाउने
हटमेल ईमेल सिर्जना गर्नुहोस्